Norway: Hadii aad Sweden iyo Finland kasoo gasho, 14 maalin oo karantiilis ah. - NorSom News
Norway: Hadii aad Sweden iyo Finland kasoo gasho, 14 maalin oo karantiilis ah.
Sida ay sheegtay wasaaradda cadaalada iyo amniga Norway, laga bilaabo maalinta Talaadada ah ee Berri, dadka Norwiijiga ah ee kasoo gala wadamada Finland iyo Sweden, ayaa lagu sameyn doonaa 14 maalmood oo karantiilis ah.
Waxeyna wasaaradu arintaas ku sababeysay in looga hortagayo faafista caabuqa Corona-virus.
Wasiiradda cadaalada Monica Mæland ayaa sheegtay in dadka degan xuduuda labada wadan, ama ka shaqeeyo xuduudka Sweden ee degan Norway, aan lagu sameyn doonin karantiilis.
Dhanka kale dadka kasoo adeegto xuduudka Sweden, ayaa iyagana lagu sameyn doonaa karantiilis 14 maalmood ah, hadii ay ka gudbaan xuduudka Norway ayna tagaan oo alaabo kasoo iibsadaan gudaha dalka Sweden.
Wasiiradda cadaalada ayaa sidoo kale sheegtay in dowlada Norway aad uga shaqeyneyso, sidii dadka Norwiijiga ah ee ku sugan wadamada dibadda, nabadgalyo loogu soo celin lahaa guryahooda.
Xigasho/kilde: Justisminister Monica Mæland: – Nordmenn som har vært i Sverige må i karantene fra tirsdag av.
Previous articleNorwiijigii ugu horeeyay ee Corona-virus laga helay oo ka caafimaaday.
Next articleNorway: Booliska oo awood loo siiyay inay xiraan dadka jabiya karantiilista.